Artemis sy ny sary mampihetsi-po an'ny vehivavy amin'ny sary famantarana NASA | Famoronana an-tserasera
Miova ny fotoana ary mipoitra ny tanjaky ny vehivavy amin'ny angovo rehetra azo atao ka izao ny NASA no mampiditra azy ho mpandray anjara amin'ny sary famantarana vaovao. Toy izany no ankalazany ny fandefasana ny vehivavy voalohany ho an'ny volana.
NASA fantatsika ny fitiavany ny logo kalitao avo lenta amin'ny endrika ary ao amin'ny sary famantarana ho an'ny iraka Artemis dia nampiasa ny sary mampihetsi-po ny vehivavy. Ny sary famantarana amin'ny famolavolana izay mihoatra ny miavaka ary mamela ny ravina hanonta ny dikany lehibe ho an'ny fotoana tokony hiainantsika.
Misy dikany manokana amin'ny anaran'ny programa Artemis. Tamin'ny iraka voalohany tamin'ny volana, Apollo, io anaran'ireo andriamanitra grika taloha io dia nampiasaina. Y Artemis dia rahavavin'i Apollo kambana toy ny andriamanibavin'ny volana ihany.
Ary manana lehibe kokoa aza midika ho an'ny iraka vaovao nivoahan'ny NASA manana tanjona ny handefa ny lahy sy ny vavy ho amin'ny volana. Nasehony mihitsy aza ny habakabaka iray izay ahitantsika mpanamory sambon-tany roa, lahy sy vavy, mizaha toetra ny soa sy ny tombotsoany.
Manana ny iraka hatolotra i Artemis ny ezaka rehetra ataon'ny NASA sy ny firenena amerikana miverina amin'ny volana ary ho an'ny vehivavy mitondra ny fanilo mamiratra. Ary io fanilo io no hanokatra ny làlan'ny iraka manaraka, izay ny planeta Mars; raha ny marina dia manana an'ity andiana peta-drindrina noforonin'i NASA ity ianao taona vitsivitsy lasa izay miaraka amin'i Mars ho seho fampisehoana sy tanjona.
Un Sary famantarana Artemis izay asehoana jiro sy aloka ny volana volana miaraka amin'ny sarin'ny vehivavy amin'ny fomba tena mampihetsi-po. Ohatra iray harahina.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Ny Logo Vaovao NASA dia mankalaza ny fandefasan'ny vehivavy ny volana